China mira axial (zvakasiyana) kuyerera pombi fekitari uye vagadziri | Liancheng
Z (H) LB wehunyambiri axial (zvakasiyana) aibuda pombi chinhu chitsva generaleration chigadzirwa vakabudirira yakataurwa Group ichi achishandisa kudzidzisa yepamusoro vavatorwa mudzimba knowhow uye akangwarira pamasikiro pahwaro zvinodiwa kubva vanoshandisa uye mamiriro ezvinhu kushandiswa. Dzino chigadzirwa inoshandisa ichangoburwa kwazvo hydraulic womuenzaniso, siyana pamatunhu efficacy, yakatsiga kuita uye wakanaka mhute kukurwa kwevhu kuramba; ari impeller iri chaiyo vakakandawo ane wakisi muforoma, mumwe chechetere uye unimpeded pamusoro, akafanana rakarurama kukandira divi kune kuti design, akaderedza zvikuru hydraulic kukweshera kurasikirwa uye zvinotyisa kurasikirwa, nani pakuenzanisa impeller, wakakwirira kushanda kupfuura zvavo impellers ne 3-5%.
nezvo kushandiswa hydraulic zvirongwa, purazi-nyika kudiridza, maindasitiri mvura chokufambisa, mvura uye abudise mumaguta uye mvura yavaive mapurani.
Inzwi nokuti kupomba mvura yakachena kana zvimwe mvura mumuviri zvemakemikari hunhu zvakafanana avo mvura yakachena.
Svikiro tembiricha: ≤50 ℃
Medium arambe achirema: ≤1.05X 10 3makirogiramu / m 3
ph ukoshi svikiro: pakati 5-11
Previous: duku tsvina waigona mudziyo
Next: moto-kurwa pombi
kuroora Danho mhepo kutonhodza kutenderera pombi
Double Suction Split Case Pump, 30hp Submersible Pump, abudise kupomba Machine , abudise Pump,